आनन्द जीव एवं विश्वको स्थायी भाव, स्वभाव र स्वधर्म हो । – eRoyaltimes
शैतान, धर्म र पुर्नजन्म — भरतथबिक्रम ढकाल
सरकारी नीति नियम स्पष्ट र सहयोगी हुनु पर्दछ – भण्डारी
सगरमाथा अन्तर्राष्ट्रिय कराते, पुष २७ देखि
संविधान कार्यान्वयनमा बृहत् सहभागिता भएमा स्थिरता, एकता र नेपालको समृद्धिमा सहयोग
हामी किन मीठो खानेकुरा खान रुचाउँछौं ? हामी किन रमाइला ठाउँहरु घुमफिर गर्न रुचाउँछौं ? हामी किन सिनेमा हेर्न रुचाउँछौं ? हामी किन आकर्षक पहिरन लगाउन रुचाउँछौं ? यी सबैको जवाफ फरक–फरक ढंगले दिन सकिएपनि अन्नत मूल ध्येय एउटै हो, आनन्द । हामी पैसा कमाउन चाहन्छौं, यश आर्जन गर्न चाहन्छौं, मान र प्रतिष्ठा कायम राख्न चाहन्छौं, सुविधायुक्त जीवन विताउन चाहन्छौं किन ? अन्तिम उत्तर एउटै हो, आनन्दका लागि ।
श्रीमद्भागवत गीतामा के भनिएको छ भने, यस संसारमा दुई किसिमका मानिस मात्र आनन्दमा रहन सक्छन् । एक, पूर्ण अज्ञानी । दुई, जसले बुद्धिमाथि विजय प्राप्त गरेका छन् । बाँकी सबै दुःखी हुन्छन् । जीवनको आनन्दबाट विमुख हुन्छन् । अर्थात उनीहरुले आनन्द अनुभूत गरिरहेका हुँदैनन् । आत्म आफैमा आनन्दमय छ । तर, माया–मोहको आवरणले घेरिएपछि त्यो आनन्द विलुप्त हुनपुग्छ । पैसा, घर, परिवार, गाउँ, देश इत्यादिका कारण मान्छेमा आशक्ति बढ्छ ।
त्यसो त कुनैपनि प्राणायाम आफैमा अत्यान्तै लाभदायक छन् । प्राणायामले शरीरमा शुद्ध वायु मिल्छ । फोक्सो, मुटु लगायतका अंगहरुलाई सक्रिय बनाउँछ । शरीरका सम्पूर्ण रक्त संचार प्रक्रियामा सघाउ पु¥याउँछ । साथसाथै मनलाई शान्त र उमंगित तुल्याउँछ । कुनैपनि प्राणायाम तपाईं÷हामी गर्न सक्छौं । प्राणायाम गर्नका लागि जुनसुकै समय पनि अनुकुल […]
४६ जना साहित्यिक व्यक्तित्वले स्थलगत अध्ययनसँगै साहित्य सिर्जना